एमाले–माओवादी एकता : ‘लभ अफियर’ कि ‘लिभिङ टुगेदर’ ? - Jhilko
एमाले–माओवादी एकता : ‘लभ अफियर’ कि ‘लिभिङ टुगेदर’ ?
माओवादी र एमाले मिलेर नकेपा निर्माण भएको एक वर्ष हुनै लागेको छ । यो एक वर्षको अन्तरालमा यी दुई पार्टीबीचको एकतालाई लभ अफियर भन्ने कि लिभिङ टुगेदर भन्ने ? यो विषयमा गहन छलफल हुनुपर्ने बेला आएको छ । माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड र एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले काठमाडौंको राष्ट्रिय सभागृहबाट पार्टी एकताको घोषणा गरेको एक वर्ष पूरा हुन लागेको भएता पनि यो एकता प्रेमिल जोडीले लुकी–लुकी, डराई–डराई गरेको लभ अफियर हो कि भन्ने पनि चर्चा परिचर्चा सुरु भएको छ ।
प्रेमको बारेमा आख्यान तथा कृति लेख्ने साहित्यकारहरुले टिन एजको लभ, युवा अवस्थाको लभ र प्रौढ अवस्थाको लभलाई बिभिन्न तरिकाले परिभाषित गर्ने गरेका छन् । तर ती धुरन्धर सहित्यकारहरु यतिबेला पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीको लभलाई कस्तो लभका रुपमा परिभाषित गर्ने भन्नेमा दोधारमा परेका छन् ।
साहित्यकार, तथा प्रेम विशेषज्ञहरुलाई नै जिल्ल पार्ने यो लभ आखिर कस्तो हो त ? यो घरबारे टाइपको लभ हो कि टिन एजरहरुको जस्तो रमाइलो र टाइम पासका लागि मात्र गरिएको लभ हो ? यो पत्ता लगाउन निकै कठिन परेको छ । एक थरि व्याख्या गर्छन्, टिन एज जस्तो नेकपाको लभ आखिर लभ गर्यो गर्यो अन्तमा बाबु आमाले थाहा पाएपछि गाली गर्ने र दुई चार झाप्पु हानेपछि टुंगिने त होइन ? अर्को थरिको प्रश्न छ, आखिर नेकपाको यो लभ मन मिलुनजेल डिप लभ र लिभिङ टुगेटर अनि मन नमिलेपछि बलात्कार भने जस्तो अहिले बजारमा चल्तीमा रहेको स्वार्थी लभ हुने त होइन ?
अर्को थरिको व्याख्या यस्तो छ, कि नेकपाको लभ प्रौढ उमेरका मानिसहरुले गर्ने जस्तै लभ हो । न त यो टुंगिन सक्छ न त झाङ्गिन नै । यिनीहरुको लभ त असाध्यै छ, न भगाएर लैजाने सक्ने हुती छ न पोइल जाने सक्ने हिम्मत नै । त्यसैले नेकपाको लभ पनि अचम्मकै छ ।
नेकपाको लभ पनि ‘सरप्राइज’ तरिकाको हुन्छ । लभलाई तल्लो तहसम्म पु¥याउनु मुख्यतः दुई लभरहरु केपी र पिकेको मन भित्रैदेखि मिल्नु पर्छ । लभलाई ट्राजिडीमा परिणत हुन नदिई र संस्थागत गर्नका लागि पार्टीकोे केन्द्र, स्थायी समिति र सचिवालय गठन भइसकेको छ । तर, कम्युनिष्ट पार्टीको विचार उत्पादन गर्ने पोलिटब्युरो अझैसम्म बनेको छैन । जनवर्गीय संगठनहरु एकाध वाहेक अझै साविक पार्टीका साविक संगठनका रुपमा सामान्य दिनचर्यामै छन् । यसले गर्दा लभ कुन चरणमा पुगेको हो त्यो खुट्याउन गाहे छ ।
पुष्पलालले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना गरेको बैशाख ९ गते ७० वर्ष पुग्दैछ भने लेनिन जयन्ति पनि त्यसै दिन पर्दछ । नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि केही दिनमै जनतालाई ‘सरप्राइज’ दिने बताएका छन् । यसबाट पनि के आशा गर्न सकिन्छ भने यो लभ चाँडै विवाहमा परिणत हुँदै छ र सुमधुर घरजम स्थापित हुने छ ।
भाजपा युद्धको हल्ला फिजाएर चुनाव जित्न चाहेको पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीको आरोप
चिनियाँ विद्यार्थीहरू अमेरिकामा पढन जान छोडे
अमेरिका चीन बीचको व्यापार युद्ध चकिएयता चिनियाँ विद्यार्थीहरूले अध्ययनका लागि आफ्नो...
प्रधानमन्त्री ओली–सभापति देउवा भेट
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर...
‘जोत्नेले जमीन नपाएसम्म भू–उपयोग विधेयक अर्थहीन’
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसद भीमबहादुर रावलले भू–उपयोगसम्बन्धी नीति महत्वपूर्ण...